कांग्रेसको ‘हाट’मा नेताको भाउ « Nepal Bahas
कांग्रेसको ‘हाट’मा नेताको भाउ
प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार २१:१४
नेपाली कांग्रेसको चौधौं ‘महाधिवेशन’ के भन्ने ?, धेरै भए ‘राष्ट्रिय भेला,’ नत्र ५ वर्षे हाट बजारजस्तो, यसपाली पनि केवल स्थापित नेतृत्वमध्ये कसैलाई रबर स्टाम्पको अनुमोदन गरेर सकिने छाँट छ । पार्टीको नीति, सिद्धान्त, रणनीति, लक्ष्य, संकल्पजस्ता विषयमा छलफल, बहस, चिन्तन र मन्थन गर्ने मन कसैमा देखिएन । वैचारिक अनिकाल आजको कांग्रेसको विशेषता भएको छ, जहाँ पदको तानातान र हानथाप छ । सिद्धान्त सिद्धिएर रित्तो देखिन्छ, जसका नेताहरू लोकतन्त्रका रित्ता ढ्वाङ जस्तो लाग्छ ।
यतिबेला महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधिहरू कम्तीमा केन्द्रीय समिति सदस्य, नत्र सभापति, महामन्त्री पद ताकेर उठ्ने भन्दै हिँडेका छन् । सबैलाई पद चाहिएको छ, तर पद किन चाहिएको हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ । पार्टीको महाधिवेशन वा जनप्रतिनिधित्वको निर्वाचन होस्, सबैले आफ्नो भाउ बढाउने गर्छन् । कांग्रेसको यस हाट–बजारमा पनि सबै चालुपुर्जा नेताहरू आफ्नै भाउ बढाउन मात्र ध्याउन्नरत छन् । विचार र बुद्धिको ठेक्का कुनै नेतालाई दिइन्छ । उसले महाधिवेशनमा झारा टार्न एउटा कागज तयार पारेर ल्याउँछ । महाधिवेशन सकिएपछि त्यसलाई कसले हेरोस् ! महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउन हिँड्छन् ।
रामचन्द्र पौडेल वा शेरबहादुर देउवा वा डा. शेखर कोइरालामध्ये एक काँग्रेसका सभापति होलान् नै । डा. शेखर ‘भयानक शक्ति’ बनेर आइरहेका छन् । त्यसमा गगन थापा पनि सामेल भएर प्यानल बनाई लड्ने सम्भावना बढेपछि कांग्रेसको बागडोर फेरि कोइरालाहरूको हातमा जान्छ कि भन्ने देखिन्छ । यी बाहेकको गुटलाई बाह्रौं महाधिवेशनका भीमबहादुर तामाङ र नरहरि आचार्यको प्यानलले झैँ शर्मनाक हार व्यहोर्नुपर्ने अवसर सुरक्षितै छ ।
महाधिवेशनमा कांग्रेसले पार्टीभन्दा पनि भीड वा कुम्भमेलाका रूपमा आफूलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्छ । कांग्रेसप्रति यथावत रहेको जनआकर्षणलाई हेर्दा जनमतले होइन, सङ्गठन निर्माण तथा परिचालन गर्ने नेताहरूले नै जनसमर्थन फ्याँक्दै हिँडेको कारणले कांग्रेस कमजोर भएको अर्थ र दोष नेतृत्वमाथि जान्छ । महाधिवेशनका क्रममा कांग्रेसको दलीय आचरण र सामूहिकताको भावनालाई होइन, असहमत हुने सबैलाई पछारेर आफू बलियो हुन निर्दलीय आचरण र खुट्टा तान्ने मनोवृत्ति अभिव्यक्त हुने परिपाटी नै बसिसक्यो । पार्टीभित्र वैचारिक बहस होइन, नसुध्रिएको आपसी ‘रगडा’को पराकाष्टा भएर महाधिवेशन आइरहेको छ ।
कांग्रेसबारे जनतामा सकारात्मक चासो र आकर्षण उर्लेर आएको कुरा धरातलीय यथार्थ हो । तर यो आकर्षण र जागरणबारे नेतृत्वले आत्मसात गर्ने इच्छाशक्ति देखाएको छैन । जनताले पार्टी (हरू) बारे आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहेको हुन्छन् । तर जनभावनलाई संस्थागत रूपले समेट्ने र जनताका मनसँग खेल्ने कला नेतृत्वले देखाउने गरेको छैन । महाधिवेशन मात्र नयाँ हो, नेतृत्वका अनुहारहरू पुरानै हुन् । अब पनि बासी विचार, नसुधे्रको प्रवृत्ति र यसका सिद्धान्त तथा मान्यतासँग तालमेल नहुने स्वभाव बोकेर पार्टी हाँक्छु भनी कसैले सोचेको छ भने त्यो साह्रै अनर्थ हुन्छ ।
सङ्गठन जसको पनि हुनसक्छ । तानशाहको पनि पार्टी हुन्छ । मौरी, कमिला आदि समुहमा बस्ने प्राणी हुन् भने सलह, धमिरा, अरिँगाल, बाँदरहरू पनि समुहमै बस्ने प्राणी हुन् । तर धमिरा र मौरीको सङ्गठनात्मक आचरण वा गतिविधि फरक हुन्छ । आतङ्ककारी सञ्जाल, अण्डरवल्र्ड वा डाँकाको पनि सङ्गठन हुन्छ । त्यसकारण पार्टी हुनका लागि सङ्गठन हुनुपर्छ भन्दैमा त्यसको सामाजिकता र मानवीयता बिर्सन मिल्दैन ।
कम्युनिस्टहरूको पार्टी हुन्छ र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने शक्तिको पनि पार्टी हुन्छ । तर त्यो पार्टीको जनतासापेक्ष नियत कस्तो छ, त्यसैले नै त्यसपार्टीको अल्पायु वा दीर्घायु निर्धारण गर्दछ । लोकतन्त्र भनेको भनेर सुनाउने कुरा होइन, गरेर देखाउने कुरा हो । ‘भनेर’ होइन ‘बनेर’ लोकतन्त्रवादी प्रमाणित हुनुपर्छ । ‘समाजवाद’ किताबमा लेख्ने (मात्र) कुरा नभै पार्टीको सामाजिकीकरण प्रक्रियाको मार्गदर्शन हो । त्यसकारण कांग्रेसले आफूलाई समाजवादी भनाउन समाजवादप्रतिको उसको धारणा र आचरण प्रष्ट पार्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा पार्टीतन्त्र हावी भयो भने त्यहीँबाट तानाशाहको उत्थान हुन्छ ।
कांग्रेसले आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त र मार्गदर्शनको पुनः परिभाषा गर्ने बेला आएको छ । परिभाषाको घोषणाले मात्र हुन्न त्यसमा टिक्ने आचरण र इच्छाशक्ति पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यो महाधिवेशनमा उसले नीति र कार्यक्रममा भन्दा निर्वाचन र नेतातिर सम्पूर्ण ध्यान एकोहोर्याइरहेकोले वैचारिक पक्ष मृतप्रायः भएको छ । कांग्रेसले अब अर्को संघर्ष चलाउनुपर्छ । यसले आफ्नै नियत, मनोवृत्ति र कार्यशैलीसँग संघर्ष गरेर जित्न सक्नुपर्छ ।
जुनसुकै पार्टी होस्, त्यसले निर्वाचन र नीतिगत रूपमा दुई छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पाठ एमाले र कांग्रेसका महाधिवेशनहरूले सिकाएका छन् । नत्र निर्वाचनको कोलाहलले नीतिगत पक्षलाई अन्धकारतिर धकेल्ने रहेछ । नीतिबिनाको नेतृत्व व्यर्थ मात्र होइन, खतरनाक पनि हुनसक्छ । नीतिगत कार्यप्रक्रिया नहुँदा ‘हुकुमी’ वा ‘हैकमी’ कार्यशैलीले प्रश्रय पाउँछ । खासगरी पञ्चायत गएपछि कांग्रेसमा नीतिमुखी नभएर नेतामुखी एवं हैकमी शैलीले यसरी पश्रय पाउँदै गयो कि आखिर त्यो नै कांग्रेसको परम्परा बन्नपुग्यो । अब त्यस पार्टीले वस्तुस्थितिका साथै मनस्थितिमा पनि परिवर्तन भएको देखाउन सक्नुपर्छ । कांग्रेस अब पार्टीजस्तो होइन, पार्टी नै बनेमात्र त्यसले दिग्विजयी बन्न र दीर्घायु पाउन सक्दछ ।